Technology Archives - Sa Ka War
Knowledge / Technology / သုတ ရသစုံ
အောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့ သင့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး အလုပ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာနေသင့်လဲ..?
May 14, 2019 May 24, 2019 - by admin - LeaveaComment
ကမ္ဘာကျော် တရုတ်သူဌေးကြီး “ဂျက်မား” က လူငယ်တွေအနေနဲ့ အောင်မြင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးအလုပ်မှာ ဘယ်လောက်ြ ကာကြာနေသင့်သလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်မှာ အကြံပြုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဂျက်မား ရဲ့ အကြံပြုချက်အရ ကိုယ့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးအလုပ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝအတွက် အရေးအကြီးဆုံး အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လူငယ်ေ တွအနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကို …
Health / Knowledge / National / Technology / သုတ ရသစုံ
အတန်းထဲ က ကျောင်းသားတစ်ယောက် ရဲ့ စာစီစာကုံး တစ်ပုဒ်ကြောင့် မိသားစုတစ်စုလုံးရင်နာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ နောင်တ
ဖုန်းလေး တစ်လုံးဖြစ်ချင် သူ ကျွန်မ မနေ့ က ကလေးတွေကို စာစီစာကုံးတစ်ပုဒ်ရေးခိုင်းလိုက်သည်။ ခေါင်းစဉ်က ရိုးရိုးလေးဖြစ်ပါသည်။ “ဘဝတွင်အဖြစ်ချင်ဆုံးအရာ” ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ “ဆရာမ … ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်ချင် … ဖြစ်ချင်တာကို ရေးခဲ့လို့ရသလား” ကလေးတစ်ယောက်က ထမေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်မက “ရတာပေါ့ကွ … ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်သလဲ ဖြစ်ချင်တာကို ရေးခဲ့လို့ရတယ်” ကလေးတွေ ပျော်သွားကြသည်။ တစ်ယောက်တစ်ခွန်း …
If you have yet to try the developing Budgie desktop, the latest release of Ubuntu Budgie isaperfect opportunity to experienceaclassy and user-friendly computing platform. Budgie is …
Microsoft on Wednesday announced new artificial intelligence features and functionality for several of its flagship products and services, including Office 365, Cortana and Bing, at an event in San Francisco. …
A lot of people might have thought Oracle’s announcement of the autonomous database at last year’s OpenWorld and its subsequent release earlier this year were the whole story, but there’s …
Alexa Raad is chief operating officer of Farsight Security, based in San Mateo, California. Farsight Security isaprovider of real-time actionable Internet threat intelligence solutions. In this exclusive interview, …
A group of Tinder founders and executives has filedalawsuit against parent company Match Group and its controlling shareholder IAC. The plaintiffs in the suit include Tinder co-founders Sean …